Ukubuka Ingaphambili Lasebhishi Elibukekayo - I-Airbnb
Ukubuka Ingaphambili Lasebhishi Elibukekayo
Lena iyunithi yezinkanyezi ezingu-5 yokubukeka kwehhotela enokubukeka okuhlaba umxhwele kakhulu ebhishi. Inomnyango omkhulu wokuhambisa ingilazi okukushiya ungenawo umoya ngemva kokubona ukuthi yini ozoyivula nsuku zonke. Ukuhlala kule yunithi kuzokunika isiqhingi esihle kakhulu sokuhlala. Hlola izimangaliso zase-Aruba, ezihlala khona ogwini olulondolozwe kakhulu e-Aruba. Ifulethi lethu elithandekayo likunikeza okokuzithokozisa kwangempela kwase-Caribbean. Ukuvuka olwandle ugeza ematsheni ulinde nje ukuthi ujabulele ukudla futhi uqale uhambo lwakho.
Ikamelo elisha elihle elinegumbi lokugezela elivulekile. Isici esikhetheke kunazo zonke ukubukeka kolwandle okuhlaba umxhwele. Izandla zibukeka kahle kakhulu kuwo wonke ama-Aruba. Zihlolele wena. Uzothola amathawula asebhishi ekamelweni lakho. Uphinde futhi ube ne-patio ngaphandle kwekamelo lapho ungahlala khona futhi uphumule mhlawumbe wenze i-bbq futhi ujabulele ukubuka okumangalisayo. Ibhishi elingaphambili linemipheme ecacile yamanzi aluhlaza okwesibhakabhaka. Ilinganiswe ngebhishi elingu-1 e-Aruba futhi ishiwo ezihlokweni eziningi emhlabeni jikelele. Ibhishi elilondoloziwe ngenxa yama-mangroves ngakwesokudla lapho kuqala khona ibhishi okusho ukuthi banakekela kahle kakhulu iflora nezilwane okwenza kube yindawo engcono kakhulu yokutshuza nokutshuza. Iphinde ibe nokuphuka komkhumbi ongakuhlola. Sifake izithombe zokuphuka komkhumbi ezithombeni zethu. Khumbula ukuthi konke lokhu kungaphandle kwendawo yakho. Sinikeza ukuvakasha okuhle kakhulu okufana nokubhukuda ngaphansi kwamanzi, ukugwedla ngesikebhe okucacile nokuningi. Ungabuza ngalokhu lapho ufika.
4.90 · 201 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-201
Umbungazi u-John no-Marie bazophuma endleleni yabo ukuze bakusize futhi bakubonise okokuzithokozisa okuhamba phambili e-Aruba. Sicela ubone okushiwo abanye ukuze ubone izinto ezimangalisayo izivakashi ezishoyo ngokokuzithokozisa kwazo nababungazi.
Umbungazi u-John no-Marie bazophuma endleleni yabo ukuze bakusize futhi bakubonise okokuzithokozisa okuhamba phambili e-Aruba. Sicela ubone okushiwo abanye ukuze ubone izinto ezima…